दक्षिणतर्फको खुला सीमा भएको छिमेकी देश भारतमा दैनिक चार लाख हाराहारी मानिस कोरोना सङ्क्रमित भई हरेक दिन तीन हजारभन्दा धेरै जनाको निधन हुँदा यसको असर नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो । अहिले नेपालमा दैनिक सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् । यी पङ्क्ति लेख्दा एकैदिनमा ५८ जनाको निधन भएको छ । यस्तो स्थिति अझ भयावह बन्ने सम्भावना दृष्टिगत गरी सरकारले अन्य प्रयाससँगै नियन्त्रणका लागि झन् कडाइकासाथ लकडाउन गर्न बाध्य हुनेछ । यतिबेला नेपालभरि कहीँ निषेधाज्ञा त कहीँ लकडाउन नै लगाएर कोरोना नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ र यसको असरले जनजीवनलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । यद्यपि यो प्रयास मानिस बचाउनकै लागि गरिएको जनताले बुझेको भए पनि श्रमजीवीहरूको बाँच्ने आधारको कमीले चिन्ताग्रस्त हुनु श्रमिकहरूको बाध्यता हो ।
कोरोनाको पहिलो भेरियन्ट गतवर्ष नै हामीले भोगेकै हो । त्यो भोगाइपछि अब यो सकियो भन्ने ठान्यौँ । गतवर्षको अनुभवबाट हामीले यसको मारबाट बच्ने केही कुरा सिकेका पनि हौँ । तर यो दोस्रो भेरियन्ट झन् शक्तिशाली भएर आयो, जसले गर्दा गतवर्षको अनुभवले थेग्नै नसक्ने भएको छ । अझ भारतमा तेस्रो भेरियन्ट आउने चर्चा चलेकाले नेपालमा पनि थप चिन्ता भएको छ । यसले गर्दा गतवर्ष नै जर्जर भएको हाम्रो अर्थतन्त्र दोस्रोपटक थप मारमा परेको छ । यसको असर आम मानिसको जनजीवनमा परेको छ । कोरोना भने दश गुना शक्तिशाली भएर आएको छ । तर राज्यले कोरोनाको दोस्रो लहर आउने विज्ञहरूको पूर्व चेतावनीप्रति गम्भीरता नदेखाएकोमात्र होइन, भारतमा सडकमा शवको लहर लाग्दा समेत सीमाको तगारो खुलै राख्यो । राज्य संयन्त्रहरूले गतवर्षको जति पनि तयारी गर्न जाँगर देखाएनन् । फलतः अहिले ज्यान बचाउन अस्पतालको सेवा समेत पाउन नसकी सबैले घरभित्रै भगवान् भरोसे भई बस्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा हुँदा खानेको जमातको ठूलै छ । उनीहरूले काम गर्न नपाएपछि हातमुख जोड्ने उपाय नहुने नै भयो । यस्तो भएपछि जसरी पनि मर्नु छ भने किन सडकमा गएर काम माम नखोज्ने भनी सर्वसाधारणबाट निषेधाज्ञाको अवज्ञा हुनसक्छ नै । अहिलेसम्म कुनै पनि तहका सरकार वा संस्थाहरूले गत वर्षझैँ सडकमा लाइनमा बसेर भात खाएर ज्यान बचाउने व्यवस्था पनि गरेको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा श्रम गरेर छाक टार्ने
वर्ग कसरी बाँच्ने ?
पहिलो कहरले बूढाबूढीहरूलाई धेरै असर गरेको थियो भने यस पटकको लहरले जवान, बच्चासमेतलाई ढालिरहेको पाइएको छ । कोरोनाको खोप दिएपछि युरोपमा कम असर परे पनि भारत र नेपालमा भने किन यति धेरै क्षति ? फेरि नेपालमा खोप उपलब्धतामा कठिनाइ देखिएको छ । यो सङ्क्रमण सितिमिती हट्ने देखिन्न । तेस्रो लहरको पनि सम्भावना देखाइँदैछ । त्यसैले यो शक्तिशाली कोरोनाबाट बच्न त्रिकोणात्मक लडाइँको जरुरी छ । पहिलो हरेक मानिस आफैँले, दोस्रो सरकार र तेस्रो स्थानीय निकायहरू । यसरी तीनतिरबाट सङ्घर्ष गरेर हामीले कोरोनामाथि विजय हासिल
गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हर क्षेत्रको अगुवाइ गर्दै जनता जोगाउने र बलिययो बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने राजनीति दलहरूको नेतृत्व भीरको लहराझैँ हावामा लहराएको छ ।
अहिले कोरोना कि राजनीति भन्ने सबाल खडा भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको वेगले विश्वलाई नै उछिनेको यो समयमा पनि नेपालका राजनेताहरू (?) ले लुब्ध राजनीतिको रहर नग्न रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छ । हुन त राजनीति कहिल्यै नअघाउने खेल हुँदो रहेछ । राणाहरूले १०४ वर्ष शासन गर्दा पनि नअघाएकाले २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सङ्घर्षले राणालाई विस्थापित गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो । यसपछि राजा, पञ्च, अघाएनन् । तिनलाई हटाएका काँग्रेस, कम्युनिस्टहरूको ल्याएको अहिलेको राज्य व्यवस्था हो । यो व्यवस्था, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउनेहरू नै अहिले राजनीतिको अगुवाइ गर्दैछन् । अहिले पदीय राजनीति गरिरहेका नेताहरू पनि सधैँका लागि नहुने ध्रुवसत्य छ ।
तैपनि राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिलाई पदीय शक्तितृष्णा भने कहिल्यै मेटिदो रहेनछ । अहिले त्यही तृष्णतृप्तिका लागि नेताहरू राजनीतिक रमिता देखाइरहेका छन् । केन्द्रमा त पहिलेदेखि नै यस्तो राजनीति हुँदै आएकाले हुने नै भयो । अहिले त अपवादलाई छाडेर सबै प्रदेशमा नैतिकतालाई खोपामा राखेर राजनीति भइरहेको छ । यो खेलमा सांसद खरिद, बिक्रीदेखि दलबाटै निष्काशनसमेतका काम भइरहेका छन् । आज एउटा सांसद एउटा दलमा हुन्छ, भोलि अर्को दलमा । एक दलबाट निर्वाचित सांसद संविधान विपरीत अर्को दलको पक्षमा लागेर मताधिकार दाबी गर्छ । मुख्यमन्त्री पनि आजको भोलि फेरिने अवस्था भएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अहिले यही भइरहेको छ । संसद् चलिरहेको छैन, हालैमात्र आधा दर्जनभन्दा धेरै आध्यादेश जारी भएका छन् तर यीमध्ये कोरोनासम्बन्धी एउटा पनि छैन । यसरी बेमौसमको बाजाझैँ संसद् बोलाउने र बन्द गर्ने काम भइरहेका छन् । यी कामबाट नेपाली जनताले सजिलै अनुभव गरेको कुरा भनेको हाम्रा राजनेताहरूको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा नभै सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित छ ।
यही जनउत्तरदायीहीन राजनीतिक खेलक्रममा सिर्जित संवैधानिक सङ्कटको समाधान अदालतबाट भएपछि पनि अझै राजनीतिक समाधान निस्केको छैन । दुई महिना पहिले गर्नुपर्ने काम बल्ल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले अहिले गर्न थालेका छन् । यसको छिनोफानो गर्ने भनी यही वैशाख २७ गते सरकारले विश्वासको मत लिने भन्यो, छिनोफानो होला नै । यसरी समग्र राजनीतिको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रण, जनताको रक्षाभन्दा आफ्नै वृत्तको राजनीतिक पेटारो भर्नतिर गएको स्पष्टै छ ।
नेपाली राजनीतिक वृत्तले कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर उखान चरितार्थ गरिरहेको छ । यसको परिणाम राजनीतिक वृत्त नै घृणा र विरोधको विषय भएको छ । पदमा नहुँदा त कुरै छाडौँ पदमै हुँदासमेत सम्मान र आस्थाको साटो घृणापात्र शिवाय केही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो रोक्न अहिलेको महामारीमा राजनीतिलाई केही समय थाती राखेर सबै एकजुट भएर नेपाली जनताको जिउधनको रक्षार्थ लागिपर्नु पर्छ । विश्वका ठूला, साना मुलुकमा अहिले यही भइरहेको छ । सबै, सबै अरू सब काम त्यागेर कोरोना कहरको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि विश्वले के गरिरहेको छ हेरोस्, बुझोस् ।
कोरोना झन् शक्तिशाली भएर सबै उमेरका नेपालीको ज्यान लिँदासमेत नेपाली राजनेताहरू आफ्नो स्वार्थको राजनीतिमै केन्द्रित रहिरहनु विडम्बना हो । त्यसमाथि भ्रष्टाचार थपिएको छ । विचौलियाको कमिसनको कारण समयमा कोरोना विरुद्धको खोप आउन नसकेको सार्वजनिक भएको छ । नेताहरूले अहिले आफू बसेको कुर्सीमा पु¥याउने यिनै जनता नै हुन् भन्ने यथार्थ बिर्सेर आफ्नै स्वार्थको राजनीतिमा रमाउनु कदाचित नैतिक होइन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ)